MyanPay isasafe, fast and secure E-commerce System.
MyanPay isaprotected E-commerce system with Buyer/Seller Protection Policy not to cause the unwanted frauds and loss between the buyer and seller for e-commerce with Internet.
Buyer/Sender can do E-commerce System safely, easily and securely
If the buyer has MyanPay Account, payment can be easily done by using MyanPay Username and Password.
If not, the buyer can pay with one of payment methods such as MPU Credit/Debit Card, Mobile Banking, Internet Banking, E-wallet, Mobile Wallet, Over-the-counter from MyanPay.
MyanPay payment process can be reliable
MyanPay performs accurately deducting money from Buyer/Sender and sending money to Seller/Recipient/Merchant.
MyanPay sends notification to both of sender and recipient for that payment process with email or mobile SMS.
Seller/Recipient/ Merchant can receive money easily from online
MyanPay will instantly add the received amount of money into the recipient MyanPay Account from online.
The recipient need not to be always online to know about receiving of money because MyanPay will alert to the recipient’s mobile phone with SMS.
You can easily withdraw the money from MyanPay Account of the recipient into your own Bank Account or MPU Card.
How Work – For Buyer
MyanPay can perform sending money and payment to your friends, families, customers/members easily and securly in 24hours.
You can perform financial processes like online shopping, sending money, and payment transaction, donation for social organization at websites connected with MyanPay and Online Shops by using MyanPay.
In order to perform these processes, your MyanPay Account balance must have enough money.
You can withdraw from your MyanPay Balance every time.
If you don’t have MyanPay Account, you can pay in various ways of payment methods in Websites connected with MyanPay.
Can pay money instantly.
The seller can send purchased products immediately to you and give services.
Can purchase with your MPU Card, Bank Account.
The seller can’t know your secret of MPU card information and bank account Number.
Buyers can use MyanPay without fees.
Buyer can pay to seller with multi payments methods.
Buyers can pay reliably for online shopping with MyanPay.
MyanPay is always checking and monitoring not to cause the unwanted loss for buyers.
MyanPay gives services to get your payments if your purchased products is not reached to you smoothly.
Example- MyanPay gives services to get your payments with Buyer-Protection-Policy if the purchased product is not delivered to you within exact day by sellers.
MPU credit/debit card
MyanPay can perform receiving money transferred by multi payments methods from your friends, families, customers/members in 24hours.
In order to get that service, you only need to contact with MyanPay Payment system in your business websites.
Money will immediately added to your MyanPay Balance as soon as your customers, families, and friends transfer money to you.
You don’t need to be online all the time to know about receiving money because MyanPay will inform you with mobile phone SMS immediately.
You can easily withdraw the received money from MyanPay Account to your bank account or MPU card.
Can receive money instantly.
No need extra confirmations from Bank and Payment Systems.
Can receive payments from customer who has MPU Card or Bank account.
Can reduce unwanted frauds and loss.
Onlyafew service fee with merchant discount rates for MyanPay services.
Can receive money from customer with multi payments methods.
Merchant connected with MyanPay can save extra time and money.
Because MyanPay has been verified the buyers’ information.
MyanPay is always checking and monitoring every transactions for customers.
MyanPay protects not to cause the unwanted loss for merchants.
Example- MyanPay will protects and always stand for merchants by MyanPay’s Seller-Protection-Policy in the following condition like not accepting the order product when delivering to customer, wrong address and any complain occurs.
MyanPay ဝန်ဆောင်မှုသည် Internet ပေါ်တွင် အရောင်းအဝယ်၊ ဈေးရောင်း၊ ဈေးဝယ် (Ecommerce) ပြုလုပ်ရာ၌ ဝယ်ယူသူ (Buyer) နှင့် ရောင်းချသူ (Seller) အကြားတွင် မလိုလားအပ်သော လိမ်ညာမှုများနှင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမူများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် Buyer Protection / Seller Protection policy များဖြင့် ကာကွယ်မှုပေးထားသော E-commerce စနစ် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေပေးချေသူ (Buyer/Sender) သည် Online ငွေပေးချေမှုအား လုံခြုံစိတ်ချ လွယ်ကူလျင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
ငွေပေးချေသူသည် MyanPay Account ရှိပါက MyanPay Username, Password များကို အသုံးပြု၍ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
MyanPay Account မရှိပါကလည်း မိမိတွင်ရှိနေမည့် MPU credit/debit card, Mobile Banking, Internet Banking, E-wallet, Mobile Wallet, Over-the-counter စသည့် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအားလုံးဖြင့် MyanPay မှတဆင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
MyanPay ၏ ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းစဉ် Process များအား ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ခြင်း
MyanPay သည် ငွေပေးပို့သူ (Buyer/Sender) ထံမှ ငွေပမာဏ နှုတ်ယူခြင်းနှင့် ငွေလက်ခံသူ (Seller/Recipient/Merchant) သို့ ငွေပေးပို့ခြင်းများအား တိကျမှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
ငွေလက်ခံသူ နှင့် ငွေပေးပို့သူ နှစ်ဦးလုံးထံသို့လည်း အဆိုပါ ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို Email, Mobile SMS များဖြင့် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပေးပါသည်။
ငွေလက်ခံသူ (Seller/Recipient/Merchant) သည် Online မှတဆင့် လွယ်ကူစွာ ငွေလက်ခံရရှိနိုင်ခြင်း
Online မှတဆင့် ငွေလက်ခံရရှိသည့် ငွေပမာဏအား ငွေလက်ခံသူ၏ MyanPay Account အတွင်းသို့ ချက်ချင်း ပေါင်းထည့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေလက်ခံရရှိကြောင်းကိုလည်း ငွေလက်ခံသူအနေဖြင့် Online တွင် အမြဲရှိနေရန် မလိုအပ်ဘဲ Mobile ဖုန်းသို့ SMS Alert ဖြင့် ချက်ချင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
ငွေလက်ခံရရှိသူ၏ MyanPay Account မှ ငွေများအား မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် (သို့မဟုတ်) MPU Card များအတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာ Withdraw ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
MyanPay သည် အသုံးပြုရ လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု၊ ကုန်ပစ္စ ည်းရောင်းချသူများသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် Online မှတဆင့် ငွေပေးပို့ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းများကို ၂၄ နာရီပတ်လုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် လူကြီးမင်း၏ MyanPay Account အား အသုံးပြု၍ MyanPay နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Website များ၊ Online Shop များတွင် ဈေးဝယ်ယူခြင်း၊ ငွေပေးပို့ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအတွက် ငွေကြေးလှုဒါန်းခြင်း စသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လူကြီးမင်း၏ MyanPay Account Balance တွင် လူကြီးမင်းအသုံးပြုလိုသော ငွေပမာဏ လုံလောက်စွာ ရှိနေရမည် ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် လူကြီးမင်း၏ MyanPay Balance မှ ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူလိုပါက အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတွင် MyanPay Account မရှိပါကလည်း MyanPay နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Website များတွင် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
ချက်ချင်း (Instant) ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း။
ရောင်းချသူမှ သင်ဝယ်ယူသော ကုန်ပစ္စည်းကို ချက်ချင်း ပေးပို့၊ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ခြင်း။
လူကြီးမင်း၏ MPU Card, Bank account များဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း။
ရောင်းချသူမှ လူကြီးမင်း၏ လျှို့ဝှက်အပ်သော MPU Card အချက်အလက်နှင့် Bank account နံပါတ်များကို မသိရှိနိုင်ခြင်း။
MyanPay အား ၀ယ်ယူသူအားလုံးမှ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ရောင်းချသူထံသို့ ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် online shopping များတွင် MyanPay ဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
MyanPay မှ လူကြီးမင်း၏ ဈေးဝယ်ယူမှုအား အမှားအယွင်းမဖြစ်စေရန်၊ မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု၊ လိမ်ညာမှုများ မဖြစ်စေရန် စောင့်ကြည့်ပေးပါသည်။
MyanPay ဖြင့် ငွေပေးချေပြီး လူကြီးမင်း ၀ယ်ယူလိုက်သော ကုန်ပစ္စည်းသည် အစီအစဉ်တကျ မဖြစ်လာပါက လူကြီးမင်း၏ ငွေပေးချေမှုအား ပြန်လည်ရရှိအောင် MyanPay မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
(ဥပမာအားဖြင့် ... ရောင်းချသူမှ လူကြီးမင်းထံသို့ ၀ယ်ယူလိုက်သော ကုန်ပစ္စည်းအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း မပေးပို့ပါက MyanPay ၏ Buyer-Protection-Policy အရ လူကြီးမင်း၏ ငွေပေးချေမှုအား ပြန်လည်ရရှိအောင် MyanPay မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။)
MPU credit/debit card (MPU card များဖြင့် ငွေပေးချေမှုများ)
Bank transfer (ပြည်တွင်း ဘဏ်ငွေလွှဲဖြင့် ငွေပေးချေမှုများ)
Mobile Banking (မိုဘိုင်း ဘဏ်စနစ်များဖြင့် ငွေပေးချေမှုများ)
Internet Banking (အင်တာနက် ဘဏ်စနစ်များဖြင့် ငွေပေးချေမှုများ)
E-wallet (အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာများဖြင့် ငွေပေးချေမှုများ)
Mobile Money, Mobile Wallet (မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာများဖြင့် ငွေပေးချေမှုများ)
Over-the-counter (ငွေလက်ခံကောင်တာများတွင် ငွေပေးချေမှုများ)
MyanPay သည် လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု၊ Customers/Members များမှ ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေးပို့လိုက်သော ငွေကြေးများကို လက်ခံရယူခြင်းအား ၂၄ နာရီပတ်လုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လူကြီးမင်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Website များတွင် MyanPay ငွေပေးချေမှုစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု၊ စားသုံးသူများမှ ငွေပေးပို့လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် လူကြီးမင်း၏ MyanPay Balance အတွင်းသို့ ချက်ချင်းရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေလက်ခံရရှိကြောင်းကိုလဲ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် Online တွင် အမြဲရှိနေရန် မလိုအပ်ဘဲ Mobile ဖုန်း သို့ SMS Alert ဖြင့် ချက်ချင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ MyanPay Account မှ လက်ခံရရှိသော ငွေများအား မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် (သို့မဟုတ်) MPU Card များအတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာ Withdraw ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ချက်ချင်း (Instant) ငွေလက်ခံနိုင်ခြင်း။
အချိန်နှင့် ငွေကြေးအား ချွေတာနိုင်ခြင်း။
ဘဏ်နှင့် ငွေပေးချေမှုစနစ်များမှ အတည်ပြုချက်များအား ထပ်မံမလိုအပ်ခြင်း။
MPU Card ကိုင်ဆောင်သူ (သို့မဟုတ်) Bank account ရှိသူများမှ ငွေပေးချေမှုအား လက်ခံနိုင်ခြင်း။
မလိုလားအပ်သော လိမ်ညာမှုများနှင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမူများအား လျော့ချနိုင်ခြင်း။
MyanPay ၏ ၀န်ဆောင်မှုအတွက် merchant discounted rates များဖြင့် service fee အနည်းငယ်သာ ပေးရခြင်း။
ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ၀ယ်ယူသူထံမှ ငွေလက်ခံနိုင်ခြင်း။
MyanPay နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော merchant များအနေဖြင့် အပိုဆောင်း အချိန်နှင့် ငွေကြေးအား ချွေတာနိုင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် MyanPay မှ ၀ယ်ယူသူ၏ အချက်အလက်များကို ကြိုတင်၍ verify လုပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
MyanPay မှ လူကြီးမင်းအတွက် ငွေပေးချေမှု transaction များအား အမြဲစစ်ဆေး အတည်ပြုပေးလျက် ရှိပါသည်။
MyanPay သည် ရောင်းချသူ ကုန်သည်များအား မလိုလားအပ်သော ငွေဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
(ဥပမာအားဖြင့် ... ရောင်းချသူ ကုန်သည်မှ ၀ယ်ယူသူထံသို့ ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ရာတွင် ၀ယ်ယူသူမှ လက်မခံခြင်း၊ လိပ်စာမှားနေခြင်း၊ complain တက်ခြင်းများ ရှိပါက MyanPay ၏ Seller-ProtectionPolicy အရ ရောင်းချသူ Merchant နှင့်အတူ ရပ်တည်၍ ကာကွယ်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။)